Online kajy, Mitarika sy tranombarotra
-tserasera fanaovana kajy CalcProfi
CalcProfi – kajy, maimaim-poana, converters, ny tahan'ny, teny nalaina fifanakalozana, tranombarotra amin'ny aterineto. Fiovam-po latabatra, kajy, ny tahan'ny maimaim-poana.
Fizika, lalàna fototra kajy,
Radioactivity, antsasaky ny fiainana, amin'ny aterineto kajy.
Online kajy ny habetsahan'ny vainga-taratra sisa noho ny antsasaky ny fiainana.
Newton faharoa lalàn'ny mihetsika fanaovana kajy
Manao kajy ny hery, faobe sy haingana noho ny Newtons lalàna faharoa.
Ny fahatelo Newton lalàn'ny mihetsika fanaovana kajy
Hanisa ny daholobe sy haingana ny roa zavatra amin'ny alalan'ny fampiasana newtons lalàna fahatelo.
Current, fanoherana, malefaka famaritana fanaovana kajy
Manao kajy ny amin'izao fotoana izao, malefaka sy fanoherana tao amin'ny ampahany amin'ny herinaratra faritra.
Hanery faobe haingana malgache fanaovana kajy
Kajy hery, faobe, haingana ny zavatra iray, sy ny fiankinana amin'ny samy izy.
Centripetal haingana rijan fanaovana kajy
Kajy centripetal haingana, rayon ny faribolana sy ny velocity, ny boribory mihetsika mira rijan.
Hakitroky ny mamy sy ny rano masirasira fanaovana kajy
Kajy hakitroky ny madio na ny rano masirasira amin'ny ambaratonga samihafa sy ny mari-pana sira.
Force fotoana, an-tserasera kajy.
Kajy ny hery fotoana (Torque fotoana) ny rayon-Vector sy ny hery Vector ny mafy tena.
Feo haingana eny amin'ny rivotra, online kajy.
Kajy ny hafainganam-pandehan'ny feo eny amin'ny rivotra (km / h, m / s sy sns) amin'ny hafanana samy hafa, amin'ny aterineto.
Misintona mety angovo raikipohy fanaovana kajy
Kajy mety angovo, faobe sy ny hahavony ny vatana.
Gold grama ny grama fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo lanjan'ny volamena avy troy ounces ny grama sy ny grama ho Troy ounces.
Ohatrinona no mandanja amin'ny planeta hafa
Ohatrinona no milanja eo amin'ny rafi-masoandro misy planeta hafa.
Mathematic kajy, matematika, alijebra, rafitsary
Quadratic mira Wikibolana fanaovana kajy
Hamaha misy quadratic mira, mahita discriminant sy ny fakan'ny mira.
Mimari-droa isa fanaovana kajy
Manao matematika asa: fampitomboana, fisarahana, koa, subtraction, lojika SY, lojika OR, modulo 2, amin'ny mimari-droa isa
Ampahany fanaovana kajy
Ampahany fanaovana kajy - Ankoatra izany, subtraction, fampitomboana, fizarazarana ny fanafody rehetra azo avy, koa ny isa manontolo.
Decimal fanafody rehetra azo avy fanaovana kajy
Ny fiovam-po ny decimal isa ny ampahany sy ny ampahany amin'ny decimal isa
Scientific fanaovana kajy
Asa eo amin'ny isa sy ny fanafody rehetra azo avy, toy ny Ankoatra izany, subtraction, fampitomboana, fisarahana, Sine, cosine, tangen, logarithm, exponential, hery, mahaliana, radians, ambaratonga.
Alijebra teny an-tserasera fanaovana kajy
Hanisa ary tsorina alijebra fitenenana, toy ny Ankoatra izany, subtraction, fampitomboana, fisarahana,-joro fakany, isan-jato.
Square faka fanaovana kajy
Kajy ny kianja faka (2 ambaratonga faka) na tanteraka na maro.
Goba faka fanaovana kajy
Kajy ny goba fakany (3 ambaratonga faka) na tanteraka na maro.
Nth faka fanaovana kajy
Kajy ny kianja, goba ary misy nth faka na tanteraka na maro.
Decimal, mimari-droa, hexadecimal sy ny fiovam-po ny rafitra isa hafa
Niova fo maro ny mimari-droa, decimal, octal, hexadecimal sy ny isa hafa rafitra.
Tsanganana koa Worksheets
Kajy nampiany (isa) ny isa roa, mampiasa fomba tsangana koa.
Tsanganana subtraction Worksheets
Kajy subtracting (hafa) ny isa roa, mampiasa fomba subtraction tsangana.
Tsanganana fampitomboana Worksheets
Kajy hahamaro (vokatra) ny isa roa, amin'ny alalan'ny fampitomboana fomba tsangana.
Tsanganana division Worksheets
Kajy nampisaraka (quotient) ny isa roa, mampiasa fomba division tsangana.
Roman, Arabo, hindi tarehimarika mpanova
Niova fo isa amin'ny Romanina, Arabo ary hindi isa rafitra amin'izy samy izy.
Isa ho an-tapitrisany, an'arivony tapitrisa, tapitrisa tapitrisany, crores, lakhs mpanova
Niova fo maro ho any an-tapitrisany, an'arivony tapitrisa, tapitrisa tapitrisany, an'arivony, lakhs sy crores. Isan'ny zeros Na izany na tsy hita isa.
Volume fanaovana kajy
Mitadiava ny boky isan-karazany ny endriny voafaritra, toy ny goba, cone, varingarina, tontolo, piramida, amin'ny alalan'ny rijan-teny voaravona samihafa.
Varingarin'i boky rijan fanaovana kajy
Mitadiava ny boky ny varingarina, araka ny rijan, amin'ny fampiasana ny ambony sy ny faladiany rayon ny Varingarin'i.
Cone boky rijan fanaovana kajy
Mitadiava ny boky ny cone, araka ny rijan, amin'ny fampiasana ny ambony sy ny faladiany rayon ny cone.
Goba boky rijan fanaovana kajy
Mitadiava ny boky ny goba, araka ny rijan, amin'ny fampiasana ny halavan'ny amoron'ny goba.
Tontolon'ny boky rijan fanaovana kajy
Mitadiava ny boky ny tontolo, ny rijan, fampiasana rayon ny sehatra.
Telozoro mahitsizoro piramida boky fanaovana kajy
Mitadiava ny boky samy hafa karazana piramida, toy ny telozoro, mahitsizoro sy ny hafa karazana piramida, amin'ny alalan'ny rijan-teny voaravona samihafa.
Area fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra isan-karazany ny endriny voafaritra, toy ny efamira, mahitsi-, parallelogram, manjary efajoro, rhombus, faribolana, telozoro, amin'ny alalan'ny rijan-teny voaravona samihafa.
Area ny faribolana, boribory faritra raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra iray rhombus, araka ny rijan, mampiasa rayon na ny savaivony ny faribolana.
Area ny kianja, faritra efamira raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra ny kianja, araka ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny kianja na diagonal.
Area ny parallelogram, parallelogram faritra raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra iray parallelogram, araka ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny, haavony, diagonals sy ny zoro eo amin'izy ireo.
Area ny mahitsi-, mahitsi- faritra raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra iray mahitsi-, araka ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny, halavan'ny diagonal sy ny zoro eo diagonals.
Area ny rhombus, rhombus faritra raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra iray rhombus, araka ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny, haavony, halavan'ny diagonals, incircle na circumcircle rayon.
Faritra iray manjary efajoro, manjary efajoro faritra raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra iray manjary efajoro, ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny tena ratsy, ny ambony, midline, halavan'ny diagonal sy ny zoro eo amin'izy ireo.
Area ny telozoro, equilateral isosceles faritra telozoro raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny faritra isan-karazany ny triangles, toy ny equilateral, isosceles, marina na scalene telozoro, amin'ny alalan'ny rijan-teny voaravona samihafa.
Paritra fanaovana kajy
Mitadiava paritra isan-karazany ny endriny voafaritra, toy ny faribolana, efamira, mahitsi-, telozoro, parallelogram, rhombus, manjary efajoro amin'ny alalan'ny rijan-teny voaravona samihafa.
Circumference ny faribolana (paritra ny faribolana) raikipohy fanaovana kajy
Mitadiava ny circumference (paritra) ny faribolana, araka ny rijan, mampiasa rayon ny faribolana.
Paritra ny kianja, fanaovana kajy raikipohy paritra
Mitadiava paritra ny kianja, araka ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny toradroa.
Paritra ny parallelogram, fanaovana kajy raikipohy paritra
Mitadiava paritra ny parallelogram, araka ny rijan, fampiasana parallelogram halavan'ny lafiny.
Paritra ny mahitsi-, fanaovana kajy raikipohy paritra
Mitadiava paritra ny mahitsi-, araka ny rijan, fampiasana mahitsi- halavan'ny lafiny.
Paritra ny rhombus, fanaovana kajy raikipohy paritra
Mitadiava paritra ny rhombus, araka ny rijan, fampiasana rhombus halavan'ny lafiny.
Paritra ny manjary efajoro, fanaovana kajy raikipohy paritra
Mitadiava paritra iray manjary efajoro, ny rijan, fampiasana halavan'ny lafiny manjary efajoro rehetra.
Paritra ny telozoro, fanaovana kajy raikipohy paritra
Mitadiava paritra ny samy hafa karazana triangles, toy ny equilateral, isosceles, marina na scalene telozoro.
Distance teo anelanelan'ny hevitra roa fanaovana kajy
Kajy lavitra teo anelanelan'ny hevitra roa ao amin'ny lafiny roa.
Midpoint raikipohy fanaovana kajy
Kajy midpoint ny tsipika ampahany roa hevitra amin'ny lafiny roa.
Distance rijan fanaovana kajy
Kajy lavitra teo anelanelan'ny hevitra roa ao amin'ny lafiny roa, amin'ny alalan'ny fampiasana ny Flag.
Triangle fanaovana kajy
Kajy fijery, lafiny sy ny faritra ny telozoro.
Daty sy ny fotoana
Add na analana andro sy ny fotoana avy amin'ny daty
Add fotoana ny daty na fotoana amin'ny daty analana.
Nanampy sy subtracting fotoana
Nanampy sy subtracting fotoana fanaovana kajy: ampiana na analana fotoana amin'ny andro, ora, minitra, segondra.
Hanisa ny andro sy ny fotoana eo amin'ny daty
Kajy daty roa ny faharetany eo amin'ny daty sy ny 2 fotoana, ao amin'ny taona, volana, herinandro, andro, ora, minitra, segondra.
Time fiovam-po fanaovana kajy, niova fo fotoana taona maro, andro, ora, minitra, segondra.
Manao ahoana ny habetsahan'ny fotoana mandra-ny daty?
Firy taona, andro, ora, minitra, ary segondra sisa mandra-daty.
Manao ahoana ny habetsahan'ny fotoana lasa hatramin'ny ny daty?
Firy taona, andro, ora, minitra, segondra izay no lasa hatramin'ny daty.
Firy andro amin'ny volana?
Fantaro ny tena isan'ny andro amin'ny volana rehetra.
Firy andro isan-taona?
Isan'ny andro tao amin'ny ankehitriny, manaraka, teo aloha na hafa taona.
Time fanaovana kajy
Ankoatra izany, subtraction ny fotoana, samy hafa ny daty, ny fiovam-po: andro, ora, minitra, segondra.
Firy andro mandra-lohataona?
Ny tena isan'ny andro, ora, minitra sy ny segondra sisa mandra-pahatongan'ny lohataona manaraka.
Firy andro mandra-vanin-taona mafana?
Ny tena isan'ny andro, ora, minitra sy ny segondra sisa mandra-pahatongan'ny fotoam-pahavaratra manaraka.
Firy andro mandra-lavo?
Ny tena isan'ny andro, ora, minitra sy ny segondra latsaka sisa mandra-manaraka.
Firy andro mandra-ririnina?
Ny tena isan'ny andro, ora, minitra sy ny segondra sisa mandra-pahatongan'ny ririnina manaraka.
Internet, solosaina, aterineto fitaovana, ny tenimiafina gropy
Hiteraka mafy azo antoka tenimiafina mifototra amin'ny tenifototra.
My IP. Fantaro ny adiresy IP
Afaka mahita ny adiresy IP, miasa rafitra, Provider, firenena sy ny tanàna.
Information about IP adiresy
Fantaro mpamatsy, firenena sy ny tanàna amin'ny alalan'ny adiresy IP.
Online kisendrasendra isa gropy
Online kisendrasendra isa gropy miteraka ny kisendrasendra maro ny voafantina isan-karazany.
Random laharana finday gropy
Hahazo ny lisitry ny kisendrasendra telefaonina isa noho ny telefaona an-tariby sy finday, miaraka amin'ny hafa maro isa amin'ny endriny samy hafa.
Online barcode gropy
Get barcode ny nomerika vokatra fehezan-dalàna.
Rosiana taratasy Transliteration
Transliterate Rosiana taratasy ny teny anglisy sy anglisy taratasy ho Rosiana.
Nitendry hindi taratasy amin'ny fitendry virtoaly Hindi.
Nitendry Arabo taratasy amin'ny teny arabo fitendry virtoaly.
Currency Converter, vola tahan'ny fifanakalozana, tahiry tsena
Money mpanova ho an'ireo izao tontolo izao vola ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny.
Firam-bola amin'ny fifanakalozana virtoaly amin'ny aterineto, fiovam-po amin'ny fotoana mety amin'ny vola.
Bitcoin fanaovana kajy, Bitcoin fiovam-po
Bitcoin calculator online, converter Bitcoin. Bitcoin androany amin'ny tsena fifanakalozana virtoaly.
Ethereum fanaovana kajy, Ethereum fiovam-po
Etheloka calculer online, converter Ethereum. Vidim-bola androany amin'ny tsena fifanakalozana virtoaly.
Litecoin fanaovana kajy, Litecoin fiovam-po
Litecoin calculator online, converter Litecoin. Litecoin androany amin'ny tsena fifanakalozana virtoaly.
Hiteny ratsy solika, entona voajanahary, varahina, volamena, volafotsy sy metaly sarobidy hafa vidiny ara-tantara.
Simia, organika raharaha, gazy, zavatra
Health, Fitness, sakafo
Kajy ra toaka fitanana ambaratonga sy hahafantatra raha afaka manery ny fiara amin'ny ra sasany toaka afa-po amin'ny firenena samy hafa.
Ny famokarana atodinaina, kalandrie fanaovana kajy
Kajy ny tena lonaka andro ka hahazo ny famokarana atodinaina, kalandrie ho volana vitsivitsy manaraka.
Lafatra lanja fanaovana kajy
Kajy tonga lafatra tena lanjan'ny vehivavy sy ny lehilahy eo amin'ny fiankinan-doha ny taona, ny ambony sy ny vatana karazana.
Basal metabolic taha fanaovana kajy
Kajy ny basal metabolic tahan'ny, izay habetsaky ny kaloria fa ny tenanareo raha mbola mirehitra-tsasatra amin'ny neutrally mahonon-tontolo iainana.
Bmi raikipohy fanaovana kajy
Kajy vatana bahoaka ny Foto-kevitra miankina lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny taona sy ny vatana endrika.
Online calorie MediaWiki
Firy kaloria no hodorany (ho lany ny kaloria) raha nihazakazaka, mandeha, nilomano, sy ny sisa.
Weight fanaovana kajy
Weight fanaovana kajy dia manao kajy ny lanjany sy ny lalàm-panorenana; araka ny rijan ny Quetelet, Brock, Solovyov tondro. Calorie sotroiko.
Very lanja fanaovana kajy
Kajy habetsahan'ny kaloria isan'andro ilainao hanafoana avy amin'ny sakafo raha te-hihena.
Daily calorie fanaovana kajy
Kajy ianao calorie zavatra ilaina isan'andro raha te-very lanja na foana ny lanjany.
Postcodes, Weather, elanelana sy ny fotoana faritra
Marina tsara weather forecast for tanàna misy eto amin'izao tontolo izao ho an'ny anio, rahampitso, 3 andro, isan-kerinandro, 10 andro.
Distance eo amin'ny fanaovana kajy tanàna
Geographical lavitra ny mahitsy lalana sy ny lalambe teo anelanelan'ny tanàna roa.
Maha samy hafa ny fotoana eo amin'ny tanàna
Mamaritra ny maha samy hafa ny fotoana eo amin'ny tanàna, ny faritra, maha samy hafa ny fotoana eo amin'ny tanàna any amin'ny tany tontolo izao
Ny haavon'ny izay nahita
Fantaro ny Postcode amin'ny adiresy misy hevitra avy amin'izao tontolo izao amin'ny aterineto.
Auto, fiara: reraka habe, ara-teknika specs
Car ara-teknika fepetra arahana
Ara-teknika fepetra arahana ny misy fiara manao sy modely.
Fifantenana ny fiara amin'ny fepetra arahana
To mifidy fiara ny nomena fepetra arahana ara-teknika.
Kodiarana sy ny kapila habe amin'ny fiara hanao sy modely
Orinasa habe ny kodia sy ny disks, fanoloana safidy, kapila offset, ary atsofony na inona na inona manao sy fiara modely.
Kodiarana fanaovana kajy
Fiovana tao amin'ny ivelany haben'ny kodia, fahazoan-dalana, speedometer readout, sns miaraka amin'ny hafa kodiarana teo amin'ny fiara.
Mitafy habe, kiraro habe, habeny tabilao, saron-doha, fehikibo, injao fa habe
Men ny akanjo habe amin'ny aterineto fanaovana kajy
Ny olona niova fo ny akanjo habeny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, Eoropeana sy ny habeny iraisam-pirenena.
T-shirts habe amin'ny aterineto fanaovana kajy
Misy lehibe sy kely ny lehilahy sy ny vehivavy ny t-shirt habe tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.
T-shirt ho an'ny lehilahy
Misy lehibe sy kely ny olona ny t-shirt habe tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.
T-shirt ho an'ny vehivavy
Misy lehibe sy kely ny vehivavy t-shirt habe tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.
Men ny atin'akanjo habe fanaovana kajy an-tserasera
Ny olona niova fo ny atin'akanjo habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, alemà, frantsay, italianina, rosianina, tseky, Slovaky, iraisam-pirenena, na ny andilany ny habeny.
Niova fo ny vehivavy ny bikinis habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, italianina, rosianina, habe iraisam-pirenena, bust haben'ny, na ny andilany sy ny andilany habe amin'ny santimetatra.
Bra habe fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo bra habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Eoropeanina, Anglisy, Amerikana, na Aostraliana ny habeny.
Niova fo zipo habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, alemà, italianina, japoney, Rosiana, habe iraisam-pirenena, na ny andilany sy ny andilany habeny.
Jeans sy pataloha habe fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo lehilahy sy vehivavy ny pataloha jeans sy pataloha habeny ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, italianina, frantsay, Rosiana, Japoney, iraisam-pirenena, na ny andilany sy ny andilany habeny.
Tuxedos, cardigans, jumpers, blazers ny habeny fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo lehilahy sy vehivavy ny tuxedos, cardigans, jumpers sy blazers habeny ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, Eoropeanina, italianina, rosianina, Japoney, iraisam-pirenena, sakany vata, na ny andilany sy ny andilany habeny.
Ny olona niova fo ny tuxedos habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, Eoropeanina, italianina, rosianina, habe iraisam-pirenena, na ny sakany haben'ny tratrany.
Vehivavy ny tuxedos habe fanaovana kajy an-tserasera
Misy lehibe sy kely ny tuxedos vehivavy habe tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.
Ny olona niova fo ny ba kiraro habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, Eoropeana, Rosiana, iraisam-pirenena, kiraro haben'ny, halavan'ny tongotra na ny halavan'ny insole in santimetatra.
Vehivavy ny kiraro fanaovana kajy ny habeny-tserasera
Ny kiraro ny vehivavy niova fo habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Eoropeanina, anglisy, amerikana (USA), Japoney habe na santimetatra.
Ny kiraro Teen haben'ny fanaovana kajy
Mamaritra ny kiraro zatovo habe, niova fo ny kiraro zatovo habe ny habe ny firenena samy hafa.
Girls kiraro fanaovana kajy habe-tserasera
Niova fo ankizivavy kiraro habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Eoropeanina, anglisy, amerikana (USA), Japoney habe na santimetatra.
Ankizy kiraro fanaovana kajy habe-tserasera
Niova fo ny ankizy kiraro habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Eoropeanina, anglisy, amerikana (USA), Japoney habe na santimetatra.
Niova fo zaza fitafiana habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, anglisy, Eoropeanina, Rosiana habe, sakany tratra sy ny ambony, na ny zaza ny taona.
Men ny fonon-tanana habe fanaovana kajy an-tserasera
Mamaritra ny fonon-tanana ny olona ny habeny sy manamarika ny firenena samy hafa.
Niova fo ny fonon-tanana ny vehivavy samy hafa habe amin'ny habe, toy ny iraisam-pirenena, tanana circumference amin'ny santimetatra na santimetatra.
Accessories habe fanaovana kajy an-tserasera
Tadiavo sy niova fo Accessories samihafa, toy ny satroka, fehikibo, vava vola, fonon-tanana habeny ny firenena samy hafa.
Ring habe fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo peratra habe ny Amerikana, anglisy, rosianina, Japoney habe, savaivony amin'ny millimeters sy ny santimetatra, na ny rantsan-circumference.
Habe haba-tserasera fanaovana kajy
Niova fo haba habe amin'ny Rosiana habe sy ny tanana circumference amin'ny santimetatra na santimetatra.
Gold karat fanaovana kajy an-tserasera
Niova fo volamena santionany eo karà, volamena mampiavaka na ny isan-jato amin'ny firavaka volamena.